खोजीहरू हेर्नको लागि गुगलको संवर्धित वास्तविकता प्रयोग गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
सत्य यो हो कि गुगलले हामीलाई यसको रचनात्मक विचारहरूको साथमा चकित पार्न कहिल्यै रोक्दैन। यो समय यसले यसको एआर वा संवर्धित वास्तविकताले गर्छ जुन हामीलाई थ्रीडी छवि हेर्न अनुमति दिन्छ खोज परिणामको। केवल कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं भालुको वास्तविक आकार खोज्दै हुनुहुन्छ, किनकि गुगलको एआरले यसलाई तपाईंको मोबाइलको साथ क्याप्चरमा देखाउन सक्षम हुनेछ।
त्यो हो, तपाइँ प्रेस गर्नुहोस् भालु छवि को बारेमा र यो तपाईंले लिनुहुने फोटोमा देखा पर्नेछ। तपाईंले उसलाई दिनु भयो, र उहाँ त्यस सहकर्मीको अगाडि देखा पर्नुहुनेछ जो छक्क पर्न सक्छ जब उसले तपाईंले आफ्नो मोबाइलको साथ फोटो लिनु भएको देख्नु भयो।
गुगल एआर का जनावरहरू, जसलाई यो सुविधा भनिन्छ, यो दिनको लागि अज्ञात प्रकार्य हो जुन हामीलाई हेर्न अनुमति दिन्छ खोज परिणामको एक थ्रीडी छवि। ती उपकरणहरूमा जहाँ एआर सक्रिय गरिएको छ, उपकरण गुगल खोजीबाट पहुँच गरिएको छ।
मेरो मतलब, हामी के खोज्दैछौं? "ब्वाँसो कति ठूलो छ"। यसले खोज परिणाम दिनेछ र हामी अधिक जानकारी पहुँच गर्न कार्डमा एरोमा क्लिक गर्नेछौं। अर्को कार्डमा ब्वाँसो थ्रीडीमा देखा पर्दछ। "3D मा हेर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस् र हामी ब्वाँसोको साथ सफा स्क्रिनमा जानेछौं। अब हामीले यसलाई केवल हाम्रो ठाँउमा हेर्न क्लिक गर्नुपर्नेछ, र आवश्यक अनुमतिहरू दिइसकेपछि हामी ब्वाँसो हाम्रै घरमा बस्दै गरेको देख्दछौं।
entre सबै पशुहरू समावेश छन् हामीसंग सिंह, बाघ, भालु छ वा धेरै अन्य बीच सम्राट पेंगुइन। गुगल द्वारा चाखलाग्दो प्रस्ताव जुन निश्चित रूपमा संख्यामा बढ्नेछ ताकि हामी हाम्रो वातावरणमा सबै प्रकारका जनावरहरूलाई बृद्धि गर्न सकौं। त्यहाँ सँधै अन्य प्रस्तावहरू हुन्छन् वृद्धि गरिएको वास्तविकता मार्फत ग्राफिटी रंग्न.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » तपाईको खोजीको थ्रीडी छविहरू हेर्न गुगलको अपग्रेड गरिएको वास्तविकता उपकरण